यी महिलाको चक्करमा श्रीमती छोडेका हुन विश्वकै धनी व्यक्ति बेजोसले, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
यी महिलाको चक्करमा श्रीमती छोडेका हुन विश्वकै धनी व्यक्ति बेजोसले
एजेन्सी । एकाएक अजेमनका मालिक विश्वकै धनी व्यक्ति जेफ बेजोस (५५)ले श्रीमतीलाई डिभोर्स दिएपछि त्यसले विश्वमै चर्चा पायो । २५ वर्ष लामो वैवाहिक जीवन टुंग्याएका बेजोसले एक महिलाका लागि श्रीमतीलाई डिभोर्स दिएको खुलासा एक अमेरिकी पत्रिकाले गरेको छ ।
अमेरिकी म्याग्जीन द एन्क्वाइररले पूर्व टिभी एंकर लारेन सांचेज(४९) सँगको सम्बन्धका कारण बेजोसले श्रीमतीलाई डिभोर्स दिएको दावी गरेको छ । समाचारअनुसार सांचेजले श्रीमान प्याट्रिक वाइटसेलसँग डिभोर्स गरिसकेकी छन् ।
बेजोस २ वर्ष पहिला वाइटसेलकै माध्यमबाट सांचेजसँग परिचित भएका थिए । वाइटसेल र बेजोस साथीसमेत हुन् ।
द इन्क्वाइररले गएका ४ महिनादेखि उसको टीमले बेजोसको ५ राज्यमा ४० हजार मीलका दूरीसम्म ट्र्याक गरेको बताएको छ । म्याग्जीनले त्यसको प्रमाण पनि आफुसँग रहेको बताएको छ ।
म्याग्जीनले बेजोसले आफ्नो ४५५ करोड भारु बराबरको नीजि जेटमा सांचेजलाई कैयौं पटक विभिन्न सहमा घुमाएकोसमेत दावी गरेको छ ।
म्याग्जीनले सो विषयको समाचार गएको बिहीबार प्रकाशित गर्ने तयारी गरेपछि बेजोसले बुधबार नै डिभोर्सबारे सार्वजनिक गरेको दावी गरिएको छ ।
समाचारअुसार बेजोसले सांचेजलाई कैयौ पटक अश्लील तस्वीर र म्याजेज पठाएका थिए । म्याग्जीनले यो विषयमा ११ पेजको रिपोर्ट प्रकाशित गरिने जनाएको छ ।
समाचारअनुसार बेजोसको यो समाचार द इन्वाइररले गर्नुमा राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पसँग पनि जोडिएको हुन सक्ने बताइएको छ । ट्रम्प अमेजन र बेजोसका विरोधी हुन् भने द इन्वाइररका मालिक ट्रम्प निकट रहेको बताइएको छ ।
द वाशिंगटन पोस्टका समेत मालिक रहेका बेजोस विरोधी भएकाले ट्रम्पले त्यस्तो रिपोर्टमा सहयोग गरेको हुन सक्ने बताइएको छ । वाशिंगटन पोस्ट ट्रम्पको आलोचक पत्रिकाका रुपमा चिनिन्छ भने द इन्वाइररले धेरै पटक ट्रम्पको पक्षमा रिपोर्टहरु गर्दै आएको छ ।